Izibonelelo zikaRhulumente zasimahla zoLungiso lwaseKhaya - Okunye
Izibonelelo zikaRhulumente zasimahla zoLungiso lwaseKhaya
Ukuba ikhaya lakho liye lonakala kwaye awukwazi ukuza nemali yokulilungisa, urhulumenteisibonelelounokufumaneka ukukunceda. Ngelixa ingaqhelekanga, kukho izibonelelo zikarhulumente zasimahla zokulungiswa kwamakhaya ezifumanekayo kwabo kufanelekileyo.
ingaba uneminyaka eli-16 ubudala ubunzima
Izibonelelo zikaRhulumente ezifumanekayo
Xa ujonga izibonelelo zasimahla zolungiso lwasekhaya, kuya kufuneka uqale ujonge ukuba ngaba uyayilungela le nkqubo okanye iinkqubo ezinikezelwa ngurhulumente wakho nakurhulumente wengingqi. Inkqubo nganye iza neemfuno zayo zokufaneleka kunye nenkqubo yokwenza isicelo, ke qiniseka ukuba uyaziqonda ezi zinto. Nje ukuba uqiniseke ukuba udibana nazo zonke iimfuno zokufaneleka, lixesha lokuba ufake isicelo ukuze uqalise kolo lungiso.
Faka uMlilo kwigumbi lokulala
Igalari yokuhlaziya i-Bathroom
Iisampulu zeDonga eliNombala
Izibonelelo.gov yadalwa ngo-2002 njengendlela yokunceda ukwandisa ukufikelela koluntu kwiinkonzo zikarhulumente. Ngaphezulu kwe-1,000 izibonelelo zikarhulumente kunye ne-500 yezigidigidi zeedola kwimali yonyaka yesibonelelo ekhoyo. Ayizizo zonke izibonelelo ezikule nkqubo zokulungiswa kwamakhaya. Uninzi lwenkxaso mali ngeGrants.gov yenzelwe imibutho - iiarhente zikarhulumente nezasekhaya- hayi abantu.
Phambi kokuchitha ixesha ukhangela izibonelelo ezinokubakho, qala ugqibe ukufaneleka kombutho wakho yesibonelelo. Kuya kufuneka kuqala ubhalise kwi-Intanethi ukuze ugcwalise nasiphi na isicelo sesibonelelo.
Ukufaka isicelo seZibonelelo
Ukuba umela umbutho, izindlu zoluntu, urhulumente / wengingqi, njl., Qiniseka ukuba unolwazi oluninzi malunga neprojekthi kunye nendlela oceba ukuyisebenzisa okanye ukuhambisa imali. Ukuba uphosa umhla wokugqibela wesicelo, jonga umva ukuze ubone ukuba umhla wokugqibela ungowuphi na okanye ukuba isibonelelo siya kunikwa kwakhona.
indlela yokusebenzisa isakhelo sokukhawuleza
Isibonelelo soLungiso lwaMakhaya lokuGuga
ISebe lezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu ngoLawulo loKuphila koLuntu lineenkqubo zoncediso-mali I-HHS-2018-ACL-AOA-HMOD-0308: Ukukhuthaza ukuguga kwindawo ngokuPhucula ukufikelela kuLungiso lweKhaya amabhaso angama-250,000 ukuguqula amakhaya abantu abadala ukunceda abantu abadala ukuba bahlale emakhayeni abo ngaphandle kwengozi yokuwa kunye nezinye iingozi ngenxa yamakhaya angakwaziyo ukwamkela abantu abadala. Abo bafanelekayo babandakanya amaziko angenzi ngeniso (urhulumente wasekhaya okanye wabucala), kubandakanya oorhulumente kunye nabasekhaya, oorhulumente baseIndiya kunye nemibutho (American Indian / Alaskan Native / Native American), imibutho esekwe kwinkolo, imibutho esekwe kuluntu, izibhedlele, kunye namaziko zemfundo ephakamileyo zinelungelo lokufaka isicelo.
Ukulungiswa komninimzi osezantsi kwaye ephantsi kakhulu
Inkqubo yesibonelelo I-USDA-RD-HCFP-HPG-2018: Isibonelelo sokuGcina iiNdlu zasemaPhandleni Uhlahlo-lwabiwo mali luyi- $ 10,392,668 ene- $ 50,000 yokufumana ukholo olusemgangathweni, imibutho yoluntu, iiarhente zikarhulumente kunye nabangenzi-nzuzo babucala ukunceda abaninimzi abanemivuzo ephantsi nabaphantsi kakhulu ngokulungiswa kunye nokuvuselelwa kwamakhaya kwiindawo ezisemaphandleni.
United States Isebe lezoLimo
ISebe lezoLimo laseMelika (i-USDA) libonelela ngezibonelelo ezinikezelwa ngokuthe ngqo ngurhulumente womdibaniselwano kunye nenkxaso mali efumaneka kumazwe nakuluntu lwasekhaya. Unokulungela ezinye iintlobo zeegranti ezisekwe kwingingqi yakho. Ukufumanisa ukuba zeziphi iintlobo zeegranti ezinokufumaneka kwindawo yakho, khangela ilizwe lakho Imephu ye-USDA .
Inkqubo Yesibonelelo Sokulondolozwa Kwezindlu
Inkqubo ye- Inkqubo Yesibonelelo Sokulondolozwa Kwezindlu inezigidi ezili-10 zeedola. Le nkqubo iwonga izibonelelo zokuxhasa imibutho yabemi abaphantsi nabanomvuzo ophantsi kakhulu kwiidolophu ezisemaphandleni ezinabantu abangama-20 000 okanye abambalwa.
Umnini makhaya ngamnye akafanelekanga kodwa unokufumana ilungelo lokufumana iarhente okanye iqumrhu elinikezelweyo.
Abo banikwe izibonelelo banokulungisa okanye bavuselele amakhaya abanini okanye ahlala abantu.
Urhulumente namashishini orhulumente wasekhaya, imibutho engenzi nzuzo, kunye nezizwe ezamkelweyo ngokwamazwe zilungele ukufaka izicelo zoncedo.
Icandelo 504 Inkqubo yokuLungiswa kweKhaya
Inkqubo ye- IiSibonelelo zokuZinceda zoSapho olunye (Icandelo 504) ibonelela ngezibonelelo kunye nemali mboleko kubanini bamakhaya abanengeniso ephantsi. Iimali-mboleko zisetyenziselwa ukuphucula okanye ukuphucula izindlu kunye nokulungisa. Izibonelelo zezabanini bamakhaya abakhulileyo abanemivuzo ephantsi kakhulu. Izibonelelo zinikezelwa ukususa naziphi na iingozi kukhuseleko nakwimpilo kwaye kufuneka zisetyenziselwe ezi njongo. Eyona ndlela yokufaka isicelo sale nkxaso-mali kukuqhagamshelana neofisi yakho ekufutshane ukuze ufumane uncedo.
izinto ezihlekisayo zokwenza ekhaya
Isibonelelo sokufaneleka kufuneka:
Kufuneka ube ngowakho ikhaya kwaye uhlale kulo.
Kuya kufuneka ungabinakho ukulungela ikhredithi efikelelekayo.
Ingeniso yakho yosapho kufuneka ibe ngaphantsi kweepesenti ezingama-50 zerhafu yengeniso yendawo yakho.
Izibonelelo zifuna ukuba ube neminyaka engama-62 ubudala okanye ngaphezulu kwaye ungakwazi ukubuyisa imali-mboleko yokulungisa.
Elona xabiso liphezulu lesibonelelo yi- $ 7,500.
Ungafumana isibonelelo esinye ngexesha lokudla kwakho ubomi.
Ukuba uthengisa ipropathi yakho ingekapheli iminyaka emithathu, kuya kufuneka uyibuyise imali yesibonelelo.
Ukuba uyakwazi ukuhlawula inxalenye yolungiso, unokufanelekela ukudityaniswa kwesibonelelo kunye nemali mboleko.
United States ISebe leZindlu noPhuhliso lweeDolophu
ISebe laseMelika lezeZindlu noPhuhliso lweeDolophu (i-HUD) libonelela ngezibonelelo kwiqela elikhethiweyo labafakizicelo. Uninzi lwezibonelelo zidwelisiwe kwaye ziyafumaneka ngeGrants.gov, apho i-HUD ikukhuthaza ukuba ufake isicelo.
Inkqubo yoZinziso lwaBamelwane
Inkqubo ye- Inkqubo yoZinziso lwaBamelwane yinxalenye yeCDBG (iiNkqubo zeNkxaso-mali yoPhuhliso loLuntu). Ezi zibonelelo zibonelelwa ngesiseko sefomula esinikwa ilizwe, iidolophu, kunye neekota zokuphuhliswa kwezindlu zabantu abamkela imivuzo ephantsi ukuya phakathi. I-NSP izisa ngokuthe ngqo kubantu abanengeniso ephantsi kunye nephakathi engadluli kwiipesenti ezili-120 zengeniso yendawo ephakathi (AMI). I-NSP yasekwa ukuze ibonelele ngoncedo olukhawulezileyo kuluntu oludandathekileyo oluhlupheka ngenxa yamazinga aphezulu emizi ethathelwe indawo kunye nalahliweyo ngeenzame zokuzinzisa uluntu.
Hlaziya ngokutsha iipropati ezingenamntu nezichithiweyo.
Ukudiliza izakhiwo ezingcolileyo.
'Sungula iindlela zokuthenga nokuhlaziya izindlu ezichithwe ngaphambili.'
Ukuthenga nokulungisa amakhaya ashiyiweyo okanye axuthiweyo.
'Sungula iibhanki zomhlaba zamakhaya athathwe ngaphambili.'
Akukho HUD iNgxowa mali ngqo kwaBantu
Awunakho ukufumana inkxaso-mali ethe ngqo kwi-HUD ukuba ungumthengi wekhaya, usonkontileka, okanye iqabane lenkqubo. Inkxaso mali ilawulwa ngurhulumente wasekhaya / kurhulumente kunye nabanikezeli ngoncedo olungenzi nzuzo. Iimfuno zokuthatha inxaxheba kwinkqubo yakho yendawo zinokwahluka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye kuba izibonelelo ze-NSP zizenzela ezazo iinkqubo ngokubaluleka kwemali. I-HUD ikwavumela ukufikelela kwixesha elidlulileyo Izicelo zokufumana amanqaku aphezulu kwizibonelelo Abenzi-zicelo banokuphonononga ukufumanisa ukuba zeziphi iziqinisekiso ezikalwe kakhulu.
indlela yokukhupha i-wax kwisitya sekhandlela
INkqubo yeNtsebenziswano yoTyalo-mali lwasekhaya
Amazwe kunye noorhulumente basekhaya bafanelekile ngokuzenzekelayo Inkxaso mali yasekhaya . Amazwe afumana izibonelelo ngokobukhulu-ulwabiwo lwefomyula okanye i-3 yezigidi zeedola. Inkxaso-mali ihlala inikwa njengobambiswano kunye nezo ezingenzi nzuzo zalapha. Imali ingasetyenziselwa ukwakha, ukuthenga kunye / okanye ukuvuselela izindlu ezifikelelekayo ezinokuqeshiswa okanye zithengiselwe abantu abafumana imivuzo ephantsi. Esi sibonelelo se-Federal block ukuba sichaze noorhulumente basekhaya sesona sikhulu kwizindlu ezinengeniso ephantsi. Ukuthatha inxaxheba kuyakufuneka uqhakamshelane norhulumente wengingqi yakho okanye urhulumente.
Inkqubo ye- ISebe lezaMandla unike imali kubanini bamakhaya yokulungisa eya kuphucula ukusetyenziswa kwamandla ekhaya. ISebe lezaMandla laseMelika aliniki mali ngqo kubantu, kodwa liyayinika imali ithi . Amazwe emva koko enza iinkqubo kunye nokufaneleka kwesiseko kwizikhokelo nemigaqo ye-DOE. Uninzi lwabantu lufanelekile kwezi nkqubo ngumvuzo ophantsi kunye / okanye ngabantu abadala. Baza kuxhamla kwimali yamandla ephantsi yenyanga.
Inkqubo ye- Inkqubo yeMozulu ineenkqubo ezimbini, iNkqubo yokuNceda iMozulu (WAP) kunye Inkqubo yamandla kaRhulumente (i-SEP) . I-SEP yongeza imisebenzi yemozulu abantu abamkela kancinci . Amazwe alawula iNkqubo yeMozulu ngokusebenzisa iiarhente zikarhulumente wasekhaya okanye ezingenzi nzuzo. Kuya kufuneka unxibelelane nombuso wakho / urhulumente wengingqi ukufumanisa ukuba ngubani onokunxibelelana naye kunye nendlela yokwenza isicelo soncedo.
Ukuba ufumana iNgeniso yoKhuseleko yokuNcedisa okanye uNcedo kwiiNtsapho ezinabantwana abaXhomekekileyo, ukulungele ukufumana Uncedo lwemozulu .
Uninzi lwamazwe lukhetha nabani na ongaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala, ukuba umntu okanye amalungu osapho lwakho akhubazekile, kwaye ukuba kukho abantwana kusapho.
Sakuba samkelwe isicelo sakho, iarhente iya kuqhuba uphicotho lwamandla ombane ekhaya.
Ingxelo yovavanyo nengcebiso iya kuziswa kuwe kwaye kuphunyezwe ingxoxo.
Inkcitho yesibonelelo semali kwikhaya ngalinye yi- $ 6,500.
Faka isicelo seSibonelelo namhlanje
Akukho mida kwinani lezibonelelo onokuthi ufake isicelo okanye ufumane. Ukuba ufuna uncedo ekuhlawuleni ulungiso oluyimfuneko lwasekhaya, kungaluncedo ixesha lakho ukunxibelelana norhulumente wengingqi yakho okanye urhulumente kwaye wenze isicelo esinokuhlawula ngeendlela eziza kuphucula iimeko zakho zokuphila kunye nekhaya elikhuselekileyo nelisempilweni.
Ukufa Kwinkcubeko Kumhlaba I Ihlabathi Ukukhupha Xabiso Metals Ukulala Ukuphefumla Malunga Iikatala
Ngaba umphathi wam udlala ngam
simahla iscroll saw iipateni zabaqalayo
Imidlalo yemihla yeValentine yamaqela ecawa
imisebenzi yamaqela yabantu abadala abasebenzisa iziyobisi
amagama aqala ngo-x wasesikolweni
ukhuphela njani ijean ngesandla